Te-hanangana Lohalambom-Pandresena mirentirenty ao amin’ny kianjan’i Belgrade iray ny nasionalista serba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2019 5:48 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Italiano, Español, Ελληνικά, srpski, English
Ny Lohalambom-pandresena ao Skopje, Makedonia Avaratra, Desambra 2019. Saripikan'i Global Voices, CC-BY.
Manosika ho any amin'ny fananganana Lohalambom-Pandresena vaventy ao afovoan-tanànan'i Belgrade ho fahatsiarovana ny fandresena ara-miaramila tontosa tamin'ny Adin'i Balkana sy ny Ady Lehibe Voalohany ny Antoko politika nasionalista Fiaraha-mientana Fanavaozana Serba (SPO), mpiara-dia iray amin'ny antoko mitondra ao Serbia. Ny Lohalambo dia hametrahana ny sarivongan'ny Mpanjaka Petera sy ny Mpanjaka Aleksandra an'i Serbia.
Namoaka tetikasa an-tanandehibe mampiady hevitra (sy lafo) iray hafa indray ny Antoko Liam-Pandrosoana Serba (SNS) mitondra ao Serbia, tarihan'ny Filoha Aleksandar Vučić hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fahefana tamin'ny taona 2012. Ireo dia ahitana ny Fitodian'i Belgrade, dobo voaravaka iray, tahon-tsaina goavana iray, ary fiara mandeha amin'ny tariby amin'ny Mandan'i Belgrade — vao natsahatry ny didim-pitsarana ity iray farany ity.
Misitraka ny fanohanan'ny SPO, antoko ankavanana kely iray izay nanana ny anjara toerany tamin'ny taompolo 1990 ny SNS, ary nanana sampana milisy aza aza io antoko kely io izay nantsoina hoe Mpiambina Serba — saingy efa nihena tamin'ny habeny sy ny isan'ny olona ao aminy izany. Raha nanoratra ho an'ilay gazety serba Danas, ilay mpanadihady politika Miloš Mitrović dia nilaza fa ny volavolan-kevitra hananganana Lohalambom-Pandresena no “lalana iray ahafahan'izy ireo maneho fa mbola misy ry zareo.”
Ny tolokevitry ny SPO, naroso tao amin'ny Antenimieran'ny Tanànan'i Belgrade tamin'ny 6 desambra tsy nijerena izay mety ho tombam-pandaniana na drafitra hahazoam-bola amin'izany no mahatonga ny fampitahana amin'ireo maritrano diso toerana fanaon'ireo fitondrana tsirefesimandidy ao Balkana.
Ao Makedonia Avaratra ampitan-tsisintany, nanangana maritrano neoklasika mihoatra ny 130 ny tetikasa “Skopje 2014” — ao anatin'izany ny trano lehibe, sarivongana, tranoben'ny governemanta, ary mozea — izay natao tao an-drenivohitra ary nandaniana farafahakeliny 763 tapitrisa dôlara amerikana tanelanelan'ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2014. Ny fanorenana tokana lafo indrindra dia ny Lohalambom-Pandresena nantsoina hoe Porta Macedonia, izay nandanianao mihoatra ny 7 tapitrisa dolara. Feno kolikoly ny fanombohan-draharaha iray manontolo ary nahazo tombontsoa ireo mpanankarena ao amin'ny antoko VMRO-DPNME akaiky an'i Nikola Gruevski, izay nitondra an'i Makedonia Avaratra nanomboka ny taona 2006 ka hatramin'ny taona 2017.
Na ny SNS na ny VMRO-DPNME dia samy mpikambana ao amin'ny Antokom-Bahoaka Eoropeana mpandala ny nentin-drazana ary nifanolokolo fiaraha-miasa matanjaka ny roa tonta tamin'ny fotoana nahateo amin'ny fitondrana tao Makedonia Avaratra ny VMRO. Samy tafiditra amin'ny fampihemorana ny demaokrasia sy amin'ny fanimbana ny fenitry ny zon'olombelona tao amin'ny firenena misy azy avy ireo fitondrana mpandrendri-bahoaka anankiroa ireo.
Sariitatra nivoaka tamin'ny taona 2011 mamoaka an-tsary an'i Nikola Gruevski, PM Makedoniana teo aloha izay nanangana ny Lohalambom-Pandresena tao Skopje. Sariitatr'i Darko Markoviкј, AKA Dar-Mar, tao amin'ny Olompirenena ho an'i Makedonia Eoropeana. Nahazoana alalana.
Tao amin'ny fanambaràna iray, nandresy lahatra ny SPO fa mila “Fanorenam-pahatsiarovana goavana” tahaka izao i Serbia mba “hampahatsiahy antsika ireo fotoana mamirapiratra tamin'ny tantarantsika, manoma aingam-panahy ny taranaka ankehitriny sy hoavy hitia sy hiaro ny tanindrazany” hoy i Aleksandar Čotrić filoha lefitry ny Antoko:
Manolo-kevitra izahay ny hananganana ny Lohalambom-Pandresena eo amin'ny zaridainan'ny mpanjaka teo aloha, izay zaridainan'ny mpisava lalana amin'izao fotoana, eo anelanelan'ny Parlemanta Serba sy ny Lapa Vaovao, i.e. eo amin'ny Lapan'ny Filoha amin'izao fotoana. Manolotra ihany koa izahay ny hanaganana tsangambato mendrika ny Mpanjaka Peter, ilay Mpanafaka, sy ny Mpanjaka Alexander, ilay Mpampiray, izay, amin'ny maha-komandin'ny tafika serba azy ireo, dia tompon'andraikitra tamin'ireo fandresena lehibe tao Kumanovo, tao Bregalnica, Cer, Kolubara, tao amin'ny vava ady Salonika sy ireo vava ady hafa nanomboka ny taona 1912 ka hatramin'ny taona 1918.
Nanampy ny SPO fa efa natolotra tamin'ny taompolo 1930 ny hamolavolana ny fananganana Lohalambom-Pandresena saingy tsy tontosa noho ny nibodoan'i Alemaina Nazi an'i Serbia tamin'ny taona 1941.
Ny marainan'ny nanambaràn'ny SPO ny volavola, namoaka lahatsoratra nahahendratra nitondra ny lohateny hoe “Nahazo Lohalambom-Pandresena tahaka an'i Paris i Belgrade, eto ary amin'izao fotoana izao! Hanonitra amin'ny fahotana nataony tamin'ny Mpanjaka Alexander ny Serba!” ny gazety Serba mpanaitaitra Espreso. Hita ao ny tsongan-tenin'ny mpanorina ny SPO Vuk Drašković, izay filoha lefitry ny praiminisitra tamin'ny taona 1999 tao amin'ny governemantan'i Slobodan Milošević, ary minisitry ny raharaham-bahiny tamin'ny fitondran'ny PM mandala ny nentin-drazana Vojislav Koštunica (2004-2007).
Midera tsy misy fisalasalàna ilay fisantarana andraikitra ilay lahatsoratra ary tsy nilaza na inona na inona amin'izay loharanombola sy ny fiantraikany ara-tontolo iainana. Averimberiny matetika indray ny “fahotan'i Serbia,” izay midika ho lazaina ho fanadinoan'ny governemanta ao aminy ny tarazo miaramila an'ny firenena. Niteny i Drašković, ilay milaza tena ho mandala ny fanjakan'andriana st endrika fantadaza amin'ny fanomezan-kasina indray ny hetsika quisling četnik :
Manantena aho fa hanonitra amin'ny fahotantsika isika, mahatsapa tena ho hafa isika rehefa mandalo ny tsangambato na manavatsava ny Lohalambom-Pandresena rehefa tafatsangatsika izany ary rehefa miaraka maka sary amin'ireo [endrika fantatra ara-tantara] izay niaviantsika isika. Manantena aho fa hamelona ny hetsika fanonerana [fibebahana] izany ary mba ho mendrika ny razantsika isika, satria niala tamin-dry zareo isika, nanadino azy ireo isika ary nandà azy ireny.
Hatramin'izao fotoana anoratana izao aloha dia tsy mbola nisy ny valiny ofisialy amin'ny tolo-kevitry ny SPO avy amin'ny manampahefanan'i Belgrade na avy amin'ny governemanta nasionaly nolazaina ampahabemaso.
Nilaza i Miloš Mitrović fa tsy nisy torohay momba ny fandaniana sy ny hoe hanimba ny hamaitson'ny zaridaina amin'izao fotoana ny drafitra hananganana ny Lohalambom-pandresena.
Noho izany ny tanjon'ny tolokevitry ny SPO hanandratra ilay lasa mamirapiratra, dia mampahatsiahy ihany koa ilay iray hafa, izay goavana dia goavana ihany koa, tetikasam-panorenana tsangambato sy fanorenana amin'ny endrika klasika ao Skopje, fantatra amin'ny hoe antikizasiôna. Tsy hoe fiverenana ankarihary ho any amin'ny antiquité ny fananganana ny Lohalambom-Pandresena sy ireo tsangambato ho an'ireo mpanjaka taloha eto Belgrade, fa mety hanome endrika ny faritra afovoany amin'ny renivohitra hitovy endrika amin'ny tokotanim-pasana na izany aza. Ho lasa hameno ny afovoan'i Belgrade indray ireo Lohalambom-Pandresena sy ireo tsangambato […]. Raha tsy hoe tsy atao goavana ilay tetikasa raha atsangana, fa mety asisika anelanelan'ireo hazon'ny Zaridainan'ny Mpialoha Lalana.
Olana iray hafa izay mety heverin'ireo te-ho sangany ao amin'ny vondron'ny SPO ho benahoana loatra, ny vidin'ireo tsangambato sy lohalambo goavana, sy izay olona handoa amin'ny fanaovana izany — mpanankarena malalatanana ve sa ny vahoaka miaiky. Misy ny misalasala fa raha manaiky ny tolokevitry ny SPO ny governemanta sy ny antenimieran'ny tanàna, dia hianona fotsiny amin'ny lohalambo sy tsangambato roa. Nahoana moa ry zareo no hahihitra faha mbola mahatsiaro anafana hafa avy amin'ny lasa mamirapiratra koa ry zareo? Mbola betsaka izy ireny, ka mety hisy sarivongana vitsivitsy hanampiana azy ireny sy , sy farafahakeliny vato mitsangana avo iray (obelisk) — nahoana tokoa moa, tsy takona amin'ny rehetra fa na ny governemanta foibe na ny fiadidiana ny tanàna dia tia manangana tsangambato goavana. Afaka manamarina izany i Aleksandar Čotrić amin'ny filazana zavatra tahaka ny hoe “namela pyramida maro ny Farao, na dia tanihay aza ny manodidina an'ireny.”